चलचित्रमा भन्दा संगित क्षेत्रमा ठूलो माफिया रहेको सोनु निगमको खुलासा, संगित क्षेत्रमा पनि आत्महत्याको खबर आउन सक्ने चेतावनी « Sansar News -->
चलचित्रमा भन्दा संगित क्षेत्रमा ठूलो माफिया रहेको सोनु निगमको खुलासा, संगित क्षेत्रमा पनि आत्महत्याको खबर आउन सक्ने चेतावनी
५ असार २०७७, शुक्रबार १४:२८
५ असार । सुशांत सिंह राजपूतको १४ जूनको मृत्युपछि बलिउडमा उथलपुथलमा छ । सुशांतले किन आत्महत्या गरे भन्ने बारेमा धेरै अनुमानहरू आएका छन् । बलिउडमा नातावाद अर्थात् नेपोटिज्म यसको मुख्य कारण रहेको भनिएको छ ।
भनिन्छ कि सुशांतलाई ७ फिल्मको अफर आएको तर पछि उनलाई नदिएर अन्य कलाकारहरूलाई लिइएको थियो, त्यसपछि सुशांत डिप्रेसनमा आएको र आत्महत्या गरेको हुनसक्ने अनुमान पनि आएका छन् । सत्य के हो, यो केवल पुलिसको अनुसन्धानपछि मात्र थाहा हुन्छ तर यस बीचमा, सोनू निगमले भिडियो इन्स्टाग्राममा एक भिडियो शेयर गर्दै संगीत उद्योगको कालो सत्यलाई उजागर गरेका छन् । उनले संगीत उद्योगमा पनि आत्महत्याको खबर आउन सक्ने भन्दै चेतावनी दिएका छन् । सोनूले चलचित्रमा भन्दा ठूलो माफिया संगित उद्योगमा रहेको बताएका छन् ।
साढे सात मिनेटको भिडियोमा सोनू भन्छन् :
शुभ प्रभात, नमस्ते ।
मैले लामो समयदेखि कुनै कुरा बोलेको छैन । वास्तवमा म मुडमा थिइन । यसबेला भारत धेरै दबाबहरुमा गुज्रिरहेको छ । सुशांतको मृत्युपछि एकातिर मानसिक र भावनात्मक दबाबमा छ । दुःखी महसुस गर्नु स्वाभाविक पनि हो किनकी तपाईंको अगाडि एक जवानको जीवन गएको छ । कोही अत्यन्तै निर्दयी व्यक्ति हुनसक्छ, जसलाई यो कुराले कुनै फरक पार्दैन, यसबाहेक भारत र चीनको बिच जे भैरहेको छ, जसमा भारतका २० सैनिकहरू घण्टौं लडाईंपछि तड्पी तड्पी मरेका छन् । म एक भारतीय हुँ, त्यसभन्दा पनि बढी म तपाईं जस्तै मान्छे हुँ । मलाई दुबै चीज मनपर्दैन । के हुदैछ, यस्तो मारामारी । मान्छेले मान्छेलाई मारिरहेको छ । यी कुराहरुको बुद्धिमानीपूर्वक ह्यान्डल गर्न सकिन्छ यदि मान्छेले चाह्यो भने । भारत त चाहन्छ, तर अर्को पक्ष तयार छैन, उसको एजेण्डा अरु नै केही छ, जुन सबै मानिसका लागि दुःखको कुरा हो ।
सोनूले अगाडि भने, ‘म यस भिडियोको माध्यमबाट संगीत उद्योगसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनभने आज सुशांत सिंह राजपूत मरे, एक अभिनेता मरे, भोली तपाई कुनै गायक वा एक संगीतकारको बारेमा पनि यस्तो सुन्न सक्नुहुन्छ । या कुनै गीतकारको बारेमा पनि सुन्न सक्नुसक्नुहुन्छ । किनकी हाम्रो देशमा संगीत उद्योगमा जुन वातावरण छ, फिल्ममा भन्दा ठूलो माफिया संगितको क्षेत्रमा छ । म बुझ्न सक्दछु कि मानिसहरूलाई व्यापार गर्नका लागि यो आवश्यक छ । सबैलाई लाग्छ कि तिनीहरूले व्यापार गर्नु पर्छ । म धेरै कलिलो उमेरमा आउँदा भाग्यमानी भएँ, त्यसैले म यस चक्रव्युबाट भाग्न सकेँ, तर अब नयाँ बच्चाहरूको लागि आउन सजिलो मार्ग छैन ।’
दुई कम्पनीले संगीत उद्योगमा शासन गर्छन् : सोनूले भने, म सबैसँग कुरा गर्छु । कति केटाकेटीहरू मसँग यसबारेमा कुरा गर्छन् । ती बच्चाहरू निर्माता भएर काम गर्न चाहन्छन्, निर्देशक भएर काम गर्न चाहन्छन्, संगीत कम्पोजर भएर काम गर्न चाहन्छन्, तर संगीत कम्पनीले भन्नेछ कि ‘यो हाम्रो कलाकार होइन ।’ म बुझ्न सक्दछु कि तपाईं धेरै राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ, तपाईं संगीत उद्योग नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ, रेडियोमा, फिल्महरूमा के बझ्छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ । तर यो कदापी नगर्नुहोस् आर्शिवाद, गाली धेरै ठूलो कुरा हो । यो सहि छैन । यी दुई व्यक्तिको हातमा शक्ति छ, यी दुई व्यक्तिको हातमा संगीत उद्योगको दुई कम्पनी छ । उनकै हातमा यो शक्ति छ, की कुन गीत गाउने अथवा नगाउने भन्ने निर्णय उनीहरु नै गर्छन् ।
सोनुले आफ्नो कुराकानीलाई निरन्तरता दिँदै भनेका छन्, म यो सबैबाट बाहिर गइसकेको छु, म मेरो संसारमा धेरै खुसी छु । तर मैले नयाँ गायक, नयाँ कम्पोजर्स र नयाँ गीतकारका आँखामा आँशु बगेको देखेको छु,। तिनीहरू कहिलेकाँही खुलेर रुन्छन् । यदि उ भर्यो भने तपाईसँग पनि यस्ता प्रश्नहरू खडा हुन्छन् । मेरो साथ यस्तो पनि हुनसक्छ की मेरो गीत कोहि दोस्रो कलाकारले तय गर्छ । त्यहि अभिनेता, जसलाई आजकल मानिसहरु औंला ठड्याइरहेका छन् । उनीहरु भन्दै छन् कि यससँग गीत गाउनु हुँदैन । उनीहरुले अरिजीत सिंहसँग पनि यहि गरिरहेको छ ।
सोनुले भने, मैले कति गीतहरू गाएँ, जसको डबिङ्ग पनि भैसकेको छ । सोच्नुहोस् कि मैले तपाईसँग कामका लागि अनुरोध गरिन, यद्यपी तपाई मलाई बोलाएर मसँग गीत गाउनुहुन्छ, र मेरो गीत डबिङ गर्नुहुन्छ, यो के हो ? म सन् १९९१ मुम्बईमा काम गरिरहेको छु भने १९८९ देखि संगीत उद्योगमा काम गर्दैछु । जब मेरो साथ त यस्तो हुन सक्छ भने नयाँं पुस्ताहरुसँग के के भैरहेका होलान् ? एक गायकसँग १० गीतहरू गाउन लगाएर उसलाई भन्नुस् ११ औं गीत तँपाईलाई मिल्नेछ । यदि तपाईं मेरो कम्पनीमा हुनुहुन्छ भने त म तपाईंलाई काम दिनेछु । मलाई कुनै फरक पर्दैन तपाई जति नै राम्रो कलाकार भएपनि अथवा नभए पनि म तपाईलाई काम अराउँदिन । यो सहि हैन । मेरो समय त बितिसक्यो तर नयाँ पुस्ताहरूलाई यस्ता धेरै कुराहरुको सामना गर्न परिरहेको छ ।
अन्तमा सोनूले भने, मैले जे देखिरहेको छु, त्यहि गरिरहेको छु । केहि मानिसहरूले भन्नेछन् कि सोनूले मेरो नाम लिए । तर म विश्वास गर्छु कि रचनात्मकता दुई व्यक्तिको हातमा हुनुहुँदैन । यदि सबै निर्णय तपाईले नै निर्णय गर्नुहुन्छ भने संगीत क्षेत्र कसरी राम्रो हुनसक्छ ? पहिला संगीत धेरै राम्रो थियो । राजकपूरको अलग हुन्थ्यो, ओपी नाय्यर फरक थियो र शंकर–जय– किशन भिन्न थियो । सबैमा भिन्नता थियो, अहिले संगीत उद्योग संकुचित हुँदै गैरहेको छ । अन्तमा यति भन्दछु थप मानिसहरुले आत्महत्या नगरुन, यसका लागि तपाई थोरै दयालु हुनुपर्दछ । खुशी भाइचारा जस्तै व्यवहार गर्नुस् । धन्यवाद अलविदा ।